Ny androaniko | 10
[Ankapobeny ] 23 Jiona, 2017 03:43
Aza afangaro ny Kolombenana sy ny Kolontsaina.
Mahavizana be ankehitriny ny fanarahana adi-hevitra momba io resaka mampandihy mbenana io, raha toa ka tsy nahatohina fiaraha-monina akory izany nampandihy “mousta” izany fony izahay adolantsento niaina ny vanimpotoanan’ny Kaiamba. Mihaavolenta ny fampiasana ilay fitombenana ho fampilendalendana sy fanintonana andrizareo andriandahintany ankehitriny. Tratran’ny fanatontoloana tanteraka ilay dihy izay isan’ny kolontsain’ny faritra iray.
Ny zavatra iray mba isan’ny manahirana ny saiko dia ny mijery ireo azo kilasiana fa artista rehefa manao fampisehoana. Matetika hipoka ny kianja – indrindra any ambanivolo tsy misy mpiandraikitra filaminana any, na anaty trano somary teritery – dia mitohaka tanteraka eo ambany lampihazo eo ny vahoaka fa mba te hahita akaiky dia akaiky ireto artista. Kanefa rehefa tonga ny hampisehoana iny “mangitakitaka” iny dia manamorona tanteraka ny sisin-dampihazo r’ikala artista, miamboho ny mpijery, miaraka amin’ny pataloha fohy efa mampiseho ravim-benana, dia sondriana ery manontsakontsana an’iny, nefa dia tena eo ambony lohan’ny mpijery mihitsy. Misy moa ireo mandohalika dia iny mbenanana iny no atondrotondrotra any amin’ny mpijery. Mahonena, sanatria toa manambany ireto mpankafý azy ! Indraindray moa rizalahy eo ambany eo tsy maharitra dia kasihandr'i lerony ny entana. Dia ry zavavy artista indray no tezitra… tssss ka nitady dia nahazo kah !
Ny morontsiraka avaratra (andrefana sy atsinanana) no tena havanana amin’ny fampandihizana andilana, ka isan’ny nampalaza ny “jeu de mousta” lazaiko etsy ambony. Ny avy ao afovoan-tany havanana amin’ny fampandihizana soroka sy lantsi-tànana. Ny avy any atsimo havanana amin’ny fampandihizana felan-tànana sy tongotra. Sy ny sisa mety tsy haiko ny fisiany na ny fanazavana azy fa resaka ankapobeny no ataoko eto. Fa amin’izany rehetra izany dia fitafy tsotra, arakaraky ny fitafy isam-paritra avy, no isalorana : lambaoany sy salovana, akanjo lava sy lamba tsotra. Isan’ny kolotsain'ny faritra ihany koa mantsy ny fitafy nentin-drazana.
Ka mahonena mihitsy ilay adihevitra manimba ny hasin’ny dihin-drazan’ireny faritra ireny. Ny dihim-paritra dia sokajy iray anatin’ny kolontsaina (culturel) malagasy ka aoka re tsy afangaro amin’ny resa-mbenana e. Ekena fa ny andilana no ampandihizina saingy ny kolombenana dia zara raha tafiana ny tapany ambany – ireo tanora no tena manan-talenta amin’io – satria ny tanjona dia ny hampirarakivy sy hampitsanga-mitoetra ny lehilahy mijery (fa tsy ho anay andriambavilanitra akory). Fa ny tena dihim-paritra mampandihy andilana kosa tsisy fetran-taona fa na ny vaviantitra na ny tanora maitsovolo dia mitsangana avokoa miaraka amin’ny sikina sy salovana rehefa misy lanonana.
Angamba ity horonantsary iray ity no hamintinako zay tiako lazaina.
«Mialoha 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 52 53 54 Manaraka»